ABS, HIPS, takelaka vata fampangatsiahana PMMA, tsipika fanamafisam-peo ho an'ny fidiovana - China ABS, HIPS, takelaka vata fampangatsiahana PMMA, mpamatsy tsipika fampidiran-tsakafo ho an'ny Sanitaryware, orinasa –Jwell
ABS, HIPS, takelaka vata fampangatsiahana PMMA, tsipika fanamafisam-peo ho an'ny fidiovana:
JWELL dia manome ny tsipika fampidirina lovia mitarika misy fivoarana lehibe sy fanjifana angovo ambany, ny tsipika dia miaraka amin'ny rafitra fihinanan-karena fitaovana sy ny stacker automatique, ny asany famokarana mandeha ho azy dia mampihena ny vidin'ny fanodinana ary manatsara ny kalitaon'ny vokatra. Ity tsipika extrusion ity dia malaza amin'ny mpanjifanay.
Vata fampangatsiahana: misy fampiharana betsaka amin'ny famokarana varavarana vata fampangatsiahana sy gallbladder anatiny, vatasarihana, mpizara rano, sns.
Takelaka fanadiovana: Ampiasaina betsaka amin'ny sehatry ny vokatra fandroana, toy ny koveta fandroana, ny kabinetra fandroana, ny efitrano misy etona, vilia fanasana sns.
Birao fanaovana dokam-barotra: Ity tabilao ity dia ampiasaina amin'ny tabilao fitarihana, sonian'ny milina, haingon-doka, haingon-trano anaty sns.
Takelaka enta-mavesatra: Ampiasaina indrindra amin'ny sehatry ny boaty fisarihana, boaty fanangonana, kitapo fialam-boly sns.
Takelaka fiara: Ampiasaina amin'ny famokarana tampon'ny fiara sy bus, tabilao fampitaovana, backrest, vavahady fiara, zana-baravarankely, akorandohan'ny moto, fiara golf, et
Conudious Twin-screw Extruder ho an'ny haingam-pandeha haingam-pandeha